Izinkakha zeChiefs zizodlala neNkandla XI | News24
Izinkakha zeChiefs zizodlala neNkandla XI
Johannesburg – Umphakathi waseNkandla uzothola ithuba elingandele abaningi lokubona izinkakha zeKaizer Chiefs zidlala owobungani neNkandla XI KwaZulu Natal.
Ngokubika kweSoccerLaduma lo mdlali uhlelelwe umhlaka 6 kuJuni 2015 kanti phakathi kwezinkakha zeChiefs ezilindeleke kulo mdlalo kubalwa uDoctor Khumalo, Ace Khuse, Brian Baloyi, Cyril Nzama, Arthur Zwane, Fabian McCarthy nabanye.
OLUNYE UDABA:IPSL iphinde yahlawulisa uPitso Mosimane
Lo mdlalo uzobanjelwa enkundleni yezemidlalo yaseNkandla seligamenxe ihora lokuqala njengoba ekuseni lezi zinkakha zizoqala zihlole ithalente kubadlali abasafufusa bebhola likanobhutshuzwayo.
UThabo Mooki uthe uwulindele ngabomvu lo mdlalo njengoba ejabulela ukuhlangana nabadlali ayedlala nabo ngezikhathi zakhe.
“Kuyajabulisa ukuthi sibuye sihlangane futhi enkundleni,” uMooki esho.